Isihloli seNetpeak: I-SEO Bulk Research on Root Domains and Pages | Martech Zone
I-Netpeak Checker: I-SEO Bulk Ucwaningo Ngezizinda Nezimpande
NgeSonto, Agasti 11, 2019 NgoLwesibili, ngo-Mashi 31, i-2020 Douglas Karr
Izolo, ngihlangane nohlelo lokweluleka ebelungicela ukuthi ngibasize ekuqeqesheni abafundi babo ekusebenziseni izinjini zokusesha. Umbuzo wokuqala engiwubuziwe uthi:
Ucabanga ukuthi iyini i-SEO?
Umbuzo obalulekile ngoba impendulo izokhomba ukuthi ngingaba usizo yini noma cha. Ngokujabulisayo, baphendule bathi abanabo ubuchwepheshe bokuphendula lowo mbuzo futhi bazoncika olwazini lwami. Incazelo yami ye-SEO ilula kulezi zinsuku.
Yikuphi i-SEO HHAYI
Ukusebenziseka kahle kwezinjini zokucinga akuwona umbono ohlangene wamaqembu wokusebenzisa kahle.
Ukusebenza kwe-injini yokusesha akuyona into yokubuyisela emuva kwegunya lesizinda ukuzama ukushintsha ama-algorithms ukukala kangcono.
Ukusebenziseka kahle kwezinjini zokucinga akusikho ukukhohlisa noma ukukhiqiza okuqukethwe ukukhohlisa injini yokusesha ukuze ikubeke ezingeni.
Ukusebenza kwenjini yokusesha akuyona imikhankaso eqhubekayo yokucela amanye amasayithi ngezixhumanisi zangemuva.
Zonke lezi zinto zigxile enjini yokusesha… hhayi umsebenzisi wokusesha.
Yini i-SEO: Ukusebenziseka Kwamandla Komsebenzisi
Ukwenza ngcono izinjini zokusesha kuyisikhathi esidlulelwe yisikhathi futhi esidinga ngempela ukususwa kwisichazamazwi sokumaketha kwedijithali. Ama-algorithms enjini yokusesha ayabuka, athumba, futhi a-oda ngokukhalipha imiphumela ngokususelwe kusesho umsebenzisiUkuziphatha. Ama-algorithm aqhubeka evuselelwa ngokuya ngokuziphatha komsebenzisi okuqhubeka nokushintsha.
Lokho kusho ukuthi amasu akho adinga ukuqhubeka nokushintsha futhi athuthukiswe ngokuhamba kwesikhathi. Kungakho isivinini sekhasi nokuphendula kweselula bekushayela ezingeni eminyakeni yamuva… ngoba abasebenzisi bakumadivayisi eselula kakhulu futhi bakhungathekile ngesiza esihamba kancane!
Uma uzokwenza i-Search User Optimization, konke kumayelana nocwaningo ongaluqoqa kuzithameli zakho ezibhekiswe kuwe nakumncintiswano wakho. Amathuluzi we-SEO qhubeka nokwenza ngcono futhi unikeze ithani lezinto ezisemqoka zocwaningo ukuze ukwazi ukubona okuqukethwe okushayela inzalo ukuze ukwazi ukwakha isu elingcono kakhulu lokuthuthukisa, ukubhala, ukuklama, nokuphromotha okuqukethwe okuzonqoba injini yokusesha umsebenzisi.
INetpeak Checker: Amathuluzi Okucwaninga we-SEO
Ithuluzi elilodwa elikhuphuke ekuthandeni Isihloli seNetpeak, ithuluzi lokucwaninga elivela kuNetpeak Software elinikeza ukuqonda ngamapharamitha angaphezu kwama-384 ahambisana nesizinda noma ikhasi lewebhu. Ithuluzi ledeskithophu elisiza ochwepheshe abaphambili bokusebenzisa izinjini ngezici ezilandelayo:
Bheka amapharamitha angama-380 + ama-URL amaningi
Sula imiphumela yosesho ye-Google, Bing, ne-Yahoo
Cwaninga iphrofayli ye-backlink nekhwalithi yamawebhusayithi yokwakhiwa kwesixhumanisi
Qhathanisa ama-URL ngemingcele yezinsizakalo ezaziwayo: Ahrefs, Moz, I-Serpstat, Okubabazekayo, Semrush, Njll
Linganisa izimbangi zakho
Buyekeza ubudala besizinda, usuku lokuphelelwa isikhathi, nokutholakala kokuthengiwe
Hlaziya amawebhusayithi ukusebenza kwezokuxhumana
Sebenzisa uhlu lwama-proxies nezinsizakalo zokuxazulula i-captcha ngenkathi usebenzisa inombolo enkulu yama-URL
Gcina noma uthumele idatha ukuze usebenze nayo noma kunini lapho ufuna khona
Isoftware okwamanje isekelwa kwiWindows ngezinguqulo zeMacOS neLinux eza maduze.
Zama isoftware yeNetpeak
Ukudalula: Ngisebenzisa isixhumanisi esihambisanayo se Isoftware yeNetpeak kulokhu okuthunyelwe.
Tags: okuhlola i-netpeakisoftware netpeakindlela yokuziphatha yokuseshacwaninga ucwaningoinyokaabakhasi benyokasuo
I-ePR iBreaking Marketing… eYurophu